ABE | AIM Mandalay Myanmar
ABE has an outstanding global reputation. Our qualifications are designed to give you the best chance of achieving your full potential in your chosen career, whether you are alreadyaworking professional or studying to buildafuture career. There isaworld of opportunity waiting for you.
ABE can help you seize that opportunity.
ABE သည် UK အခြေစိုက်Professional အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ပညာဆက်လက်ဆည်းပူးလိုသူများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း၌ပင် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Diploma/Degree/Master များကိုအချိန်တိုအတွင်း ရယူလိုသူများ၊ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာအခြေခံများကို လေ့လာ သင်ယူပြီး နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များတွင် Bachelar, Master အစရှိသည့် အဆင့်မြင့်ဘွဲ့များ ဆက်လက် တက်ရောက် လိုသူများ အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ABE (UK) ကပေးတဲ့ Diploma မှာဆိုရင်-
UK တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နှင့် ညီမျှသော ABE(UK) Level-4 Diploma
UK တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်နှင့် ညီမျှသော ABE(UK) Level-5 Diploma
UK တက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ်နှင့် ညီမျှသော ABE(UK) Level-6 Diploma
Teachers at AIM Institute of Management will go out of their way to engage their students and inspire them to enquire and learn. This class gives our studentsachance to apply their unique skills and expand their horizons by learning something new. Hurry up - there are limited places available in this popular class!
Why ABE ?
ABE Diploma ရရှိထားပြီးသူများ၏ခိုင်မာသေချာသောအနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများ
သင်တန်းများမှာရုံးချိန်၊ကျောင်းချိန်လွတ်part time အတန်းများဖြစ်သဖြင့် အလုပ်လုပ်နေရင်း၊ကျောင်းတက်ရင်းတက်ရောက်နိုင်ခြင်း။
UK မှစစ်မေးသောစာမေးပွဲမဖြေဆိုဖြစ်ပါကလပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်ကောင်းရရှိရန်သေချာသောအောင်လက်မှတ်ဖြစ်သည့်AIM Institute of Management မှcertificate ရရှိနိုင်ခြင်း။
Employability and Self development
Managing Agile Organizations and People
Operations Management/ Managing Stakeholder Relationships
Advanced Project Management/ Corporate Finance
Principles of HR
Employee Engagement/ The HR Professional
Organizational Design, Development and Performance/ contemporary Developments in Global HRM
Buyer and Consumer Behavior/ Societal and Social Marketing
Strategic Marketing Relationships/ Digital Marketing Strategy
To Visit ABE Website
Why ABE @ AIM?
A.B.E (UK) ၏ ကမ္ဘာအမှတ်အများဆုံးဆုရှင်လည်းဖြစ်၊ A.B.E (UK) မှချီးမြှင့်သော Honorable Fellowship Award ရရှိထားသော ဒေါ်မြတ်မွန်ဇော် MBA (International Business Management, PGSM-France), Registered Business Analyst (AAFM-USA) BC Tech (UCSY), Adv. DBA, Dip HRM, Dip Mktg, Dip FM (ABE-UK) ကိုယ်တိုင် ဦးစီးသင်ကြားသောကျောင်းဖြစ်ခြင်း။
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရေးများကို UK, USA, Australia, Japan, India နိုင်ငံတို့၏ ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးများမှ PhD, M.Sc, Master, Dr. ဘွဲ့များ ရရှိထားသော သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဝါရင့်ဆရာကြီး၊ဆရာမကြီးများမှ စာတွေ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးခြင်း။
Student Centred Approach ဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း။
Study Tour, Excursion Trip များဖြင့် မိမိတို့သင်ကြားတတ်မြောက်သောTheory များကို လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လေ့လာခွင့်ရခြင်း။
၂၀၁၀ခုနှစ်ကတည်းက မန္တလေးတွင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များကိုသာ အစဉ်တစိုက်သင်ကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရှင်မနှင်းနန္ဒာ၊
မမွန်အိခိုင်နှင့် ကိုသီဟဆွေအပါအ၀င် ထူးချွန်သောကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများစွာ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း။
တက္ကသိုလ်၀င်တန်း/ GCE ‘O’ ဖြေဆိုပြီးချိန်မှစကာ Diploma/ Degree/ Bachelor/ Master / Dr ဘွဲ့များအထိ AIM တစ်နေရာထဲတွင်ပင် တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ခြင်း။
Globally Accredited ဖြစ်သော Europe တက္ကသိုလ်ကြီးများဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံParis Graduate School of Management (PGSM) တို့နှင့် Collaborate လုပ်ထားခြင်း။
Business Institute Yangon (BIY), Myanmar Leadership and Management Institute (MLMI) နှင့်Learn တို့နှင့်Strategic Partner ကျောင်းအဖြစ်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း။
ထူးချန်စွာအောင်မြင်သူများကို ပညာသင်ဆု(Scholarship) များထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှင့်ပြီး သင်တန်းတစ်ခုပြီးတိုင်း Discount ပေးခြင်း
နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု Scholarship လျှောက်ထားရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် Extra Curricula Activity အစီအစဉ်များရှိခြင်း။